UMaurice de Hond ufumana umthetho ongenahlulo kunye nesiqingatha semitha (ividiyo): UMartin Vrijland
Kwimizuzu engama-33 elandelayo, jonga uMaurice de Hond, indoda engasemva kwezopolitiko ezinkulu esinokuthi "sizithembe ngokupheleleyo". UDe Hond ufumanise ukuba uphononongo oluthile lubonisa ukuba umgaqo onesiqingatha semitha awunantsingiselo kwaye i-coronavirus ikakhulu isasazeka xa umoya ungalunganga.
Ngokuqinisekileyo uMaurice uqinisekile ngobukho bentsholongwane nangewebhusayithi yakhe zibelok.nu sifumana umnxeba wokugcwalisa iinkcukacha zakho malunga nokuba wosulelekile okanye akunjalo kwaye zeziphi iimpawu onazo. Ngapha koko, oko sele kuyindlela efanelekileyo yokufikelela kwii -apps eziza kuthi kungekudala zisibek 'esweni.
Ewe, apha kule ndawo sihlala sithetha malunga nenkcaso elawulwayo kunye nokuqonda kwenombolo 33 esetyenziswa yiFreemasonry ukubonisa ukuba bakulawulo. Andimthembi uMaurice de Hond, ngevoti yakhe yesizwe kunye nevidiyo yakhe yemizuzu engama-33, kwimitha enye.
Into esiyaziyo yeyokuba indala njengendlela eya eRoma, ukuba kusoloko kukuhle ukuhlela ukugxekwa ngurhulumente ngokwakho. Ukuba ngaxeshanye ukhuthaza abantu ukuba bagcwalise idatha yabo yezempilo ngexesha lokugxekwa, sele unabo abantu kwiwebhu yakho. Ngokukhawuleza ukhuphele usetyenziso kunye neMaurice inokujonga ngcono "ukusasazeka kwe coronavirus".
Ngaphandle kokugxekwa kwakhe, uMaurice de Hond ukukhuthaza ukuba uthathe inxaxheba ekubekweni esweni kwaye akulungiselele ii-data ezinkulu
Wonke umntu unokwazi kwiiplagi zabo ukuba le ndawo inesiqingatha semitha yoluntu inomswakama nokuba sikhohliswa ngomgangatho omkhulu. Wonke umntu untuitively uziva ngathi kukho okungakumbi ngasemva kwemitha enesiqingatha. In eli nqaku Ndigxininisa (ndinobungqina bokuba) ukuba enye kunye nesiqingatha seemitha ziyafuneka ukwenza ukufundwa nokubhala kokusebenza kweDNA / RNA yakho ngqo. Wonke umntu ke kufuneka agcine umgama owaneleyo woku. Lo mgama uyimfuneko kwaye uyimfuneko "kwi-intanethi yezinto" apho umntu aya kwenza i-1 yezinto.
Kufuneka sisuke ku-Krimson Maurice de Hond sisuka “kwi-smart Lockdown” sisiya “kuphuma smart”. Yonke loo nto izwakala imnandi kakhulu kwaye akukho nto ithethwayo, kodwa andikhange ndimthembe uDe Hond ngezibalo zakhe kwaye andizithembi izibalo zikarhulumente. Ngaba yinkohlakalo leyo? Ewe, yibize ukuba ukrokrela impilo.
Ngokubhekisele kum, akufanelanga ukuba siphume sikrelekrele, kodwa kwisohlwayo esinobuhlungu sikarhulumente oleleyo omele ngokukhawuleza ehle aze athatyathwe ngabameli babantu ababonelelwa ngabantu. Abaphathiswa abonyulwe ngentando yesininzi ngqo nabafungelayo ukunyaniseka ebantwini endaweni yokufumana isithsaba.
Kuya kufuneka siyeke ukukhalaza kurhulumente kuba sinikezela ukuba semthethweni kukarhulumente. UMaurice de Hond ubonakalisa intlonipho noxabiso kuMark Rutte kwaye kangangeminyaka emininzi ugxothiwe njengendoda evunyelweyo ukuba ithengise idemokrasi yedemokrasi yedemokhrasi ngentando yakhe. Ekuphela kwendlela yokuphuma kule meko kukujongana nolu luhlu-kunye nokukhohlisa ikhabinet kanzima kwaye ungabaniki naziphi na iikhredithi. Ayikokuphuma kobulumko, kodwa inguquko!
Musa ukubolekelelwa kumnatha olandelayo wokhuseleko; enye ebeka elona themba lilibi lotshintsho, ngelixa usityhalelwa 'ekulinganiseni uyazi' ingcinga. Khetha uguquko olunzima nolucacileyo oluyimfuneko, umzekelo, ukuthintela umthetho wokugonya ogunyazisiweyo kunye nokupheliswa kwemitha enye enesiqingatha yezinto ezingenantsingiselo. Yiya e www.fvdd.nl
UPHAKATHI 26-05-2020: ngokucacileyo ividiyo yeCafé Weltschmertz kunye nodliwanondlebe noMaurice de Hond bathathwe ngaphandle kwe-YouTube.
Umthombo wokungena: wikipedia.org, zibelok.nu, fvv.nl
Isikhundla sokuvota sikarhulumente ngabantu abangama-900 kwaye siyibiza ummeli ukuba inyanzele ii-corona zokusebenza (Hlaziya)
tags: enye enesiqingatha, coffee, intsholongwane ye-Corona, de, Phuma, eziziimbalasane, Hond, intelligente, Amazing, Maurice, imitha, uphando, kuluntu, bulumko, yokuzonwabisa, weltrschmertz
22 Meyi 2020 kwi-11: 46
Ewe kukho enye, enye evela kwiklabhu kwaye uhlala uthengisa kakuhle. Xa usiva abo bathetha, ngokungathi banabo bonke 'ubulumko' ezandleni zabo. Bangakwazi ukujonga ukuthula kwi-media iminyaka embalwa okanye bashiye isigxina kwaye bathathe 'iCorona' yakho kunye nawe. Iyothusa kwaye iyaqhubeka ukungcangcazela.
Abantu basayina uxwebhu lwezikhalazo ngoku! https://www.fvvd.nl
22 Meyi 2020 kwi-12: 08
Kungenzeka, kodwa ngekhe sikhusele ukusweleka kwama-33 xa sisithathile amanyathelo. 😷
I-ps: E-Amelika umthambo ubizwa ngokuba ngu-C rimson C ontagion  inokuba yayisisihloko seSkeke en Wiske.
22 Meyi 2020 kwi-12: 26
Ewe, ewe, uqala kwakhona ngokufihla yonke into ekwimeko yokunciphisa umda wenkululeko yokuthetha. Ndiyadlala.
Ewe, ayimangalisi xa abantu asebekhulile abanezikhalazo ezinzulu zomzimba kwaye bahlala bengondleki, izidlo ezizilungeleyo, besweleka kuloo makhaya. Abantu abadala bahlala kunye kwaye basondelelene kwaye ngenxa yoko basulelana ngomkhuhlane. Urhulumente usilele, abantu abadala bekungafanele ukuba bagcinwe kunye. Oku kuyabekeka kwaye kuya kohlwaya ngokwendlela endichaphazela ngayo. Ngaba kusekho amagosa anzima kunye nabatshutshisi abaya kubamba umphathi wabo kunye / okanye ulawulo lwamakhaya athathe umhlala phantsi / i-RIVM njl. Akunjalongo noko. Ngethamsanqa siphila kwilizwe 'elikhululekileyo' 'elinomgaqo-siseko.
22 Meyi 2020 kwi-14: 31
Kulula ukuthetha ngeLanga ukuba nje sibala ngokuqiqa kwayo yonke i-AOW kunye noxanduva lwepenshini, kunokubakho ukunqongophala kwaye asinakuqinisekisa inkcitho kwikamva. Emva kwayo yonke loo nto, urhulumente ubona kwangaphambili kwaye eyongeza, iinkampu zoxinaniso zeCovid ziyimfuneko nje ngaphandle kokunyusa i-pulse.
Nantsi enye 👃
23 Meyi 2020 kwi-11: 06
Isisombululo sifunyenwe kwezi ngxaki zepenshini:
"Inkqubo entsha etafileni kufuneka iphele kwiingxoxo malunga nemeko embi yengxowa-mali yomhlala phantsi, ngenxa yokuba bengakwazi ukufikelela kumabango abo athenjiswayo ngaphambili kumalungu abo. Ayisayi kuba yimfuneko ukuqhubeka nothetha-thethwano ngenzala yakho 'okanye ukuba unciphise ipension. "
Ngamanye amagama: akusekho siqinisekiso kumhlala-phantsi wakho kwaye nokuba imali iyazikisa ngokwabo, akufuneki ukuba babenoxanduva. Emva kwayo yonke loo nto, kungenxa yokuguquguquka kuthengiso lwesitokhwe.
22 Meyi 2020 kwi-12: 10
22 Meyi 2020 kwi-12: 18
Kat, uVogel, ngaphandle kokudinwa ubakhethe ngenye indlela kwezi ntloko zikhakhars. Unempumlo ngenxa yayo….
22 Meyi 2020 kwi-20: 12
Uthetha ukuba, impumlo ye (Gerrit) yeZalm ikubonise indlela yokukhupha ibhanki kwaye ubeke ityala labantu
23 Meyi 2020 kwi-00: 15
Kulungile, kodwa kuya kufuneka ndivume kubo ukuba badlala zombini i-flanks ngobuchule kumdlalo weHegelian. Ixesha nexesha kwakhona, umhlali ophakathi waseMadurodam uyadlalwa, achetywe iindevu aze athunyelwe engcanjini ngekhephu, okanye ngaba yayingumgibe ombi?
Ayisiyo midlalo yeqonga emnandi kwaye isimahla… ooh, i-akhawunti (yokulungisa) iakhawunti ayilandeli okwangoku
23 Meyi 2020 kwi-11: 38
Andibaniki mbulelo. Abayenzi loo nto nokuba
Abantu abangabengekho kwiKlabhu yabo abanokuba / Baza kukhuphisana nabo .. Ah, Sele bexele kwangaphambili ngesifo somkhuhlane omtsha, mhlawumbi uku-odola ligama elingcono. Zinjani i-clairvoyant kwaye zikhethekileyo. Gcina amakhoboka emisiwe kwaye edidekile, Isiqubulo sabo. Bemka nini ngokwenene. Ngcono izolo kunanamhlanje.
Sayina uxwebhu lwezikhalazo ngoku! Ayikubizi mali.
24 Meyi 2020 kwi-10: 39
Iyonke iyothusa e-Afrika
Amawakawaka amaxhoba esifo seengcongconi asweleke kule minyaka idlulileyo.
Kodwa ngoku kwiimeko ezimbalwa ze-corona, iinkampu zokubanjwa sele zimisiwe ... bona ngezantsi
Babambisa abantu esitratweni kwaye balahlwa kwiinkampu 🙁
USephus wabhala wathi:
24 Meyi 2020 kwi-15: 15
Le kliphu ingezantsi ithatha ngqo imizuzu eli-13. Ngokudibana? Ndicinga ukuba yenziwe kakuhle
Okanye njengoko umntu esithi kwizimvo: Kukho inyaniso engaphezulu apha kwimizuzu eyi-13 kunaleyo uyifumana kwiminyaka eyi-12 yemfundo yaseburhulumenteni
24 Meyi 2020 kwi-15: 35
Inja kunye nezibalo azifumanayo kwisigcina-ntloko sakhe xa wayezalwa. Akukho phando, ucinga ukuba ucinga njani kwaye njani.
« Bangaphi abantu baseDatshi abanokuhlawula amatyala abo ngexesha lentlekele ye-corona?
I-iPhone ifihla i-covid-19 yohlaziyo kuhlaziyo lwe-I-OS 13.5 »
Utyelelo lulonke: 2.614.595